Newa Times : चरीमायाको कहानी... शिबपुरीदेखि कमाटीपुरसम्म
लुम्बिनीमा बोटिङ, बाँदरको हातमा नरिवल
नेवार भूमिका रूपमा नेपाल मण्डल क्षेत्र
समाज » लेख/फीचर/समीक्षा
शिवपुरीमा घाँस काट्न सधैं साथीहरू मिलेर जान्थ्यौं । तर त्यो दिन (२०५० चैत्र १५) साथीहरू मलाई छोडेर चाँडै गएछन् र म एक्लै गएँ, भेटिनँ । एक्लै घाँस काट्दै थिएँ । चार पाँच जना मान्छेहरू आए । गाउँका केही मानिसहरूले मलाई केही दिन अगाडिदेखि नै पछ्याईरहेका थिए । तिनै पछ्याउने मानिसहरूले मलाई एक्लै देखेर उक्त दिन पनि पछ्याएको रहेछ, मैले चाल पाईन । जंगलमा घाँस काट्दै गर्दा उनीहरू आएपछि मलाई डर लाग्यो । उनीहरूको हाउभाउ हेर्दा मलाई लाग्यो, उनीहरूले ‘ग्याङ रेप’ गर्नेछन् । कराउँदा पनि सकैले सुन्ने खालको ठाउँ थिएन त्यो । त्यसैले कसैले पनि सुनेनछन्, मैले कराएको । लखेट्ने र भाग्ने क्रम झण्डै दुई घण्टा चल्यो । त्यहीँ उनीहरूले मलाई बेहोस बनाएछन् । उनीहरूले भारततिर लग्दा पनि वेहोस बनाएर लगेछन् । गोरखपुर पुगेपछि एकै पटक थाहा भयो, त्यहाँको साइनबोर्ड पढेर । यहाँदेखि लग्दा मलाई के के गरे, के भयो भन्ने कुनै कुरा थाहा पाउँन सकिंन । तर गोरखपुरमा होस खुल्दा मेरो लुगा भने फेरिदिएको रहेछ, मैले घाँस काट्न जाँदा लगाएको लुगामा म थिईंन । त्यहाँवाट कश्मिर लग्ने भनेर बुम्वईको कमाटीपुरको अँधेरीमा पु-याए ।
बम्वईमा खाना खाने ठाउँमा पु-याउँदा म रोएर आँसुको धारा हुँदा पनि कसैले वास्ता गरेन, जबकि त्यहाँ पचास–साठी जनाको ओहोर दोहोर भइरहेको थियो । कसैले केही बोलेनन् पनि । मलाई लग्ने मान्छेले मलाई त्यहीं छाडेर चिठ्ठी पु-याउन जानुछ भनेर गयो । डेढ घण्टापछि एउटी महिलासंग फर्कियो । उसलाई माइजु भन्नुपर्छ भनेर चिनाइ दियो । ट्याक्सी पनि ल्यायो । अगाडिपट्टीको ढोका खोलेर बसौंला जस्तो ग¥यो तर बसेन । त्यहींबाट कता गयो, थाहा भएन । ती महिला पछाडि बसिन् र मलाई पनि बस्न लगाइयो । ढोका खोलेर भाग्नको लागि ट्याक्सीको ढोका खोल्न पनि जानिंन र ट्याक्सीको सिसा फोड्ने आँट पनि आएन ।
ती महिलालाई मेरो वारेमा सबै थाहा थियो । दुःखको दिन गयो भन्दै उनी मलाई मुसार्थिन् । ‘काम छिटो सिक्छौ’ भन्दा कुनै सीप सिकाउन लागेको हो कि भन्ने पनि लाग्यो । ट्याक्सी रोकिएको ठाउँमा ‘वेलकम टु बम्बे सेन्टर’ देखेपछि होस् हवास गयो । प्रौढ कक्षामा जाँदा दिदीबहिनी हराएको, बम्बईमा लगेर बेचेको कुरा गर्थे । यो कुराले अझै डराएँ । पहिला ३ दिन मलाई लुकाएर राखे । त्यहाँ झुण्डिएर मर्ने कोशिश गरें । तर भएन, सकिंन । तेस्रो दिनमा ‘ब्रथल’मा पु¥याए । पुरानोले सम्झाउने कोशिश गरे, त्यहाँ ३० जना थिए, नेपाली पनि । ‘राम्रो दिदी पायौ, ऋण ति¥यौ भने ३–४ वर्षमा नेपाल जान सक्छौ भन्थे उनीहरू ।
पाँचौं दिन ६५–७० वर्षको वूढा म बसेको कोठामा आयो । मैले कुटेर पठाएपछि नराम्रो ठाउँमा बेच्छौं भनेर धम्क्याए । अप्राकृतिक यौन सम्वन्ध राख्ने ठाउँमा बेच्ने कुरा गरे, डर देखाउँन । अर्को दिन ४ जना मान्छे पठाए, भित्रबाट चुकुल लगाएर ‘ग्याङ रेप’ गरे । ६ महिनासम्म भाग्ने कोशिश गरें तर सकिंनँ । त्यहिं नै प्रण गरेें – एक मुठी सास रहेर नेपाल फर्कन सकें भने मलाई बेच्नेलाई छोड्दिन भनेर । त्यतिवेला आफ्नो परिचय लुकाएर काम गर्थें ।
मलाई लैजाँदा १६ वर्षकी थिएँ, रेस्क्यु भएर नेपाल आउँदा १९ वर्षको भएँं । खाना खाँदा खाँदैको अवस्थामा प्रहरीले रेड गरेर हामीलाई मुक्त गरेको कारण जुत्तासम्म पनि लगाउन भ्याइएन । भारत सरकारले त्यहाँबाट रेस्क्यु भएपछि नेपालको सरकारलाई तपाईको चेलीबेटी रेस्क्यु भएको छ भनेर खबर गरे । सबै प्रक्रिया मलाई थाहा छैन । हामीलाई रेस्क्यु गरेर राखिएको सरकारी गृहका सुरक्षाकर्मीहरूले ‘तिमीहरुको सरकारलाई जानकारी दियौ तर तिमीहरुको सरकारले लिन मानिरहेको छैन’ भन्ने खबरले हतास तुल्याएको थियो ।
उद्धार गर्ने क्रममा धेरैजसो नाइट ड्रेसमा थिए । मेरो हालत पनि त्यस्तै थियो । अँधेरीमा हुँदा म बसेको ठाउँ क्रिस्चियनहरुको सिस्टर अर्गनाइजेसनमा एक पटक लुगा ल्याइदिया,े एउटा म्याक्सी । त्यहाँ अनाथ बालबालिकालाई राखेर पढाउने रहेछ । भित्र लाउने पेन्टी ब्रा १ पटक मात्र दिइयो । त्यसमा बस्यौ । सबैको त्यही हालत थियो ।
हामी त्यहाँ ६ महिना पुरा गरेर ७ महिना लागेसम्म सरकारी गृहमा बस्न बाध्य भयौं । जुन ठाउँ जेलजस्तै लाग्थ्यो । फरक के थियो भने कोठीमा यौन शोषण हुन्थ्यो त्यहाँ हुँदैनथ्यो । अरु मौखिक रुपमा गाली गलौज गर्ने प्रहरीले सकेसम्म दुव्र्यवहार गर्न खोज्ने सरकारी गृहमा पनि थियो । हामी बसेको एउटा कोठामा ८० जना भन्दा बढी थियो । वरिपरि फलामको डन्डीको बार थियो । सुत्ने बेलामा पनि त्यो बारबाट, बाहिरबाट पुलिसले जिस्क्याउने गर्दथे । कतिले झ्यालबाट हात छिराएर हातै पनि हाल्ने कोशिश गर्थे । हामी किशोरी थियौं । कति दिदीबहिनीले त उनीहरुले जिस्क्याएकोमा हो मा हो पनि थप्थे । यिनीहरु यस्तै हो भन्ने हिसाबले हेपेर पनि जिस्काएको हो । मन पराएर, किशोरी राम्री छे भनेर कुरा गरेको भन्दा पनि हामीमाथि हेयको दृष्टिको प्रयोग गरेको भन्ने लाग्छ ।
कतिपय केटीहरूको ती सुरक्षाकर्मीसँग राम्रै बोलचाल थियो । उनीहरुले बाहिरबाट बोलाउँथे । पानपराग खाने साथीलाई बाहिरबाट ल्याइदिने पनि गर्दथे सुरक्षाकर्मीहरू । हामी नखानेलाई केही मतलब भएन ।
१९९६ फेबु्रअरी ५ मा हामीलाई कोठीबाट निकाल्यो । १२ तारिखमा छोड्छ रे, कोर्टबाट रिलिज हुन्छ भन्ने खबर आयो । भएन । २५ तारिखको डेट दियो । त्यसपछि पनि ३ महिना लाग्छ भनियो । फर्काउँदा जुलाई १७ र २२ तारिखमा गरी दुई लटमा नेपाल ल्याइएको थियो । त्यसमा म २२ मा नेपाल आएँ ।
त्यो अवधिमा धेरै घटना भएको थियो । खान बस्नलाई त्यही सरकारी गृहमा दिइन्थ्यो । हाम्रोमा मिलाएर खानुपर्छ भन्ने छ, त्यहाँ हुँदैनथ्यो । ठुलो चनाको दाल हुन्थ्यो । विहान दाल दियो भने बेलुका फुलेको २ वटा बम दिइन्थ्यो । त्यतिमैं दिन बित्थ्यो । पछि झन्डै ३ महिना लागेको थियो । त्यो बीचमा म बसेको ठाउँबाट ६० भन्दा बढी दिदिबहिनी भागे । कहाँ गए भन्न सक्दिन तर गेट नाघेर भागे । उनीहरूलाई त्यहीं भित्रका एक दुई जना म्यानेजर सहयोगीले निकालेको रहेछ । आफूले किनेर राखेको कामदार हो भनेर कोठीबाट पनि मानिसहरू लिन आएका रहेछन् । पुलिसको भ्यानमा पनि सँगै आएको थियो । विहानको करीव १० बजेको थियो । उनीहरुको ग्याङले अरु बहिनीलाई पनि लिएर भागे । भागेको दिन पुलिसको अगाडि नै गेट तोडफोड गरिएको थियो । त्यहाँ बस्दा बस्दा नेपाल फर्काउने काम नभएपछि फेरि त्यहाँबाट पनि निस्कन पाइदैन कि भन्ने डरले पनि धेरै भागे । अहिले ती साथीहरु कहाँ पुगे के भए केही जानकारी छैन ।
म सहित २८ जनालाई त्यहाँबाट पुनामा सारियो । अँधेरीमा भएकाहरू अँधेरीमा नै थिए । अझ थप पीडा भयो । पुनामा हावापानी पनि नमिल्ने, भाषा पनि नबुझिने । मुम्बईको सहजता पुनामा थिएन । अंधेरीका सिस्टरको भन्दा फरक व्यवहार थियो त्यहाँ । त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारो प¥यो । ३ महिना त्यहाँ बस्नुप¥यो । पुनामा लग्नुभन्दा अगाडि नै नेपालबाट गौरी प्रधान (वर्तमान राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य) ‘बहिनीहरु नआत्तिनुस्, तपाईहरुलाई हामी आफ्नो देशमा फर्काउने कोसिस गर्नेछौं’ भनेर आउनु भएको थियो । त्यो कुरामा त्यति विश्वास थिएन । हामीले गाली पनि ग¥यौ । उहाँलाई तपाइले झुठो बोल्नुभएको होला । हामी तपाईको कुरा कसरी विश्वास गर्ने भनी झगडा पनि ग¥यौं । सरले केही समय हाम्रो कुरा सुन्नुभयो । अनि पछि उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुभयो । पछिल्लो समयमा हामीले उहाँलाई भेटेनौं । उहाँसँग कुरा भएपछि तुरुन्तै हामीलाई पुनामा सारिएको थियो । म एकदमै डराएकी थिएँ । यिनीहरुले फेरि के गर्न लागे भनेर । तर पछि नेपाल ल्याइयो ।
पुनाबाट नेपाल ल्याउँदा यहाँको ७ वटा संस्थाहरूले पहल गरे । पुनाबाट यहाँ डाइरेक्ट ल्याइएन, मुम्बई हुँदै ल्याइयो । नेपालमा ल्याउने क्रममा तिमीहरुलाई नेपाल ल्याउँछौ भन्ने जानकारी दिइएन । ल्याउनु अगाडि एउटा कागजमा साइन गराए । के को लागि भनी सोध्दा राम्ररी हेर्न पनि दिएनन् । हाम्रो ल्याप्चे मात्र लियो । एयरपोर्ट ल्याया,े त्यसपछि नेपालमा आइपुग्यो । मुम्बइबाट प्लेनमा चढ्दा नेपाल ल्याउने थाहा थिएन । त्यहाँ सोध्दा पनि भनेनन् । हामी २८ जनासँगै १ जना सानो बच्चा पनि थियो, छोरा २ वर्षको । त्यो साथी भर्खरै ट्राफिकिङमा परेको थियो । ५–६ महिना भयो भन्थिन् ।
यहाँको एयरपोर्टमा आउँदा ठुलो दुर्दशा भयो । मेरो खुटामा चप्पल थिएन । अरुको पनि त्यस्तै हालत थियो । पुनामा जुत्ता लगाउन पाइएको थिएन । न लुगा लगाउन पाएको न कपाल कोर्न । एयरपोर्टबाट ओर्लेको छ, खुटामा चप्पल नहँुदा मान्छे हाँसे । नेपाली समाजको मान्छे न हो । अझ हामीलाई राति ल्याएको थियो । अघिल्लो लटमा त दिउँसो ल्याएको थियो । साथीहरुले एकदमै भीड थियोे, समस्या भयो भन्ने सुनेको थिएँ । हामीलाई करिब १० बजे राति झारेको थियो । तर पनि एयरपोर्टको स्टाफले खिल्ली उडाए । ‘कमाउन गएकाहरुको अनुहार हेर, खुटामा चप्पल पनि छैन’ भने । कतिले म्याक्सीमा आएकाले पनि गिल्ला गरेर हाँसे ।
म नवज्योति केन्द्रमा पुगेको थिए । आएको केही दिनमै बाहिर निस्कें । आफ्नो कुरा समाचारमा दिने, अरु महिलासँग भेट्ने गर्न थालें । संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन थालें । साथीहरु घरै जाने भनेर कराउन थाले तर आफ्नो सामान केही छैन । घर जाने भन्दा अगाडि को को साथीको सामान छुटेको छ भनी नेमलिस्ट अनुसार सामान छुट्याएर राखेका थियौं । दशैं मान्न घर पुग्न धेरै साथीको जमर्को भयो । घर पु¥याइयो पनि । केहीलाई दशैं र तिहारको बीचमा । साथीहरूलाई घर छोड्न म पनि गएँ, संस्थाको दिदीसँगै । उनको घरमा जाँदा परिवारले एकदमै खुशी मान्नुभएको थियो । मेरो छोरीलाई ल्याइ दिनुभयो भनी संस्थाको दिदीलाई धन्यवाद दिनुभयो ।
म पुसमा मात्र घरमा गएँ । दशैंमा गईंन । मेरो समाज अलि फरक छ । १६ वसन्त पार गरेसम्म अनुभव गरेको थिएँ, मेरो समाज कस्तो छ भनेर । मलाई सजिलो हुँदैन भनेर गएको थिइन । एकैचोटि पुसमा जाँदा घरमा पस्न दिँदैनौ भनेर गाउँमा पूरै घेरा लाएर बसे । मलाई स्वीकारेर घरमा राख्यो भने मेरो दाजुभाउजुलाई समाजमा सामेल नगर्ने भनेर दबाब दिए । मैले दाजुभाउजुलाई पर्न सक्ने समस्या बुझेर त्यही दिन म फर्कें । बास पनि बसिनँ ।
घर जानुभन्दा अगाडि नै हो भारतबाट फलोअप गर्न महाराष्ट्रका एक मन्त्री र प्रहरी प्रमुख भेट्न आउनुभएको थियो । मैले उहाँहरूसँग भेट्न दिनु भनी प्रस्ताव राखेको थिएँ सिस्टरसँग । सिस्टरले तिमी भेटेर के गर्छौ भनी सोधे । मैले उहाँसँग भेटेर हामी एउटा माग राख्छौ भने । हामीले त्यहाँ बस्दा हाम्रो सामान, ब्रोथल ओनरको नाम र नम्बर, सामान सबै लिस्ट गरेर राखेका थियौं । यो सामान ल्याइदिन भनी माग गरेपछि सिस्टरले उहाँ आएपछि भेटाइदिनुभयो । मैले सबै साथीको प्रतिनिधित्व गरेर उहाँहरूसँग कुरा राखें । उहाँलाई धन्यवाद दिंदै ‘बाध्यता तुल्याउँदैनौ तर अनुरोध गर्छौ हाम्रो सामान सकेसम्म निकालिदिनू’ भनेर सामानको लिस्ट बुझायौ । कसैको लुगा, पैसा, गहना थियो ।
पुसमा हाम्रो सामान आइपुग्यो । त्यो सामान उताको प्रहरीले निकालेर यताको प्रहरी हेडक्वाटरको जिम्मामा पठाइदिनुभएको रहेछ । मैले सबैको सामान जिम्मा लिएँ । सबै साथी घर गइसकेको थिए । सिस्टर र मैले मिलेर सबैको सामान घरघर पु¥यायौं । मेरो ३५ हजार पैसा थियो पछि प्रहरीसँग १७ सय रुपैयाँ पठाइएको रहेछ ।
हिलारीबाट पुरस्कार पाएपछि...
हिलारीबाट पुरस्कार पाउँदा जीवनमा धेरै परिवर्तन भएको छ । हिजो मान्छेले मलाई चिन्दैनथे । आफूले पनि आफ्नो सर्कल भित्रको डोनर एजेन्सी चिनिन्थ्यो । नेटवर्कभित्रको को–अर्डिनेसनमा काम गरिन्थ्यो । पुरस्कारले देश विदेशको समाजमा परिचित भइयो । मेरो बुझाइमा काम गर्नलाई सजिलो भयो, संस्थागत, व्यक्तिगत हिसाबमा पनि । चुनौती पनि आयो । चिनियो । जनमानसको आस्था पनि बढ्यो । सबैको विश्वासलाई कायम राख्न बढी कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हिलारीले दिएको पुरस्कार सम्मानस्वरुप मात्र थियो । पैसा थिएन । त्यो पुरस्कार भनेको आजको दिनसम्म आउन एउटा बाटो हो । मेरो विचारमा त्यो सम्मान पनि एउटा कोसेढुंगा हो ।
म सार्वजनिक रुपमा चिनिएपछि पहिलाभन्दा समाज सकारात्मक भएको छ । सामाजिक पारिवारिक रुपमा सजिलो भएको छ । मलाई त्यो कुरो गर्व लाग्छ तर अपेक्षापूरा गर्न नसकिएला भन्ने डर लाग्छ । हिजो हेयको दृष्टिले हेर्नेले आज परिस्थिति त्यस्तो रहेछ भनेर लिने गरेका छन् ।
दलाल विरुद्ध चरिमाया
आफैंले भोगेको घटनाबाट निराश कहिल्यै हुनुहुँदैन भन्ने कुरा सिकें, मैले । सुख र दुःख जीवनको पाटो हुन्छ, मैले पनि यी पाटो भोगें । धिक्कार होस् मैले के भोगें भन्नुभन्दा दुर्घटना हो, दुर्घटनाले अन्तिम सासमा पु¥याएको छैन, अझै केही गर्न सकिन्छ, कमी हैन, मेरो दोष छैन, अपराधीले दिएको दुःख भनेको दुर्घटना हो भन्ने सोच त्यतिबेलै आएको थियो ।
गाउँमा गएँ, फर्केर आएपछि दलाल विरुद्ध गएँ । म आएको ६ महिनापछि ०५३ साल पुस १० मा जिल्ला अदालतमा अपराधीविरुद्ध मुद्दा जाहेरी दिइएको थियो । ०५४ सालमा मुद्दाको फैसला भयो ।
दलालविरुद्ध जाँदा हामीलाई चुनौती छ । पीडित महिला साथमा रहे पनि परिवारलाई समस्यामा पार्ला कि भन्ने डर हुन्छ । महिलालाई सहयोग गरेको कारणले हामीलाई पनि धम्की आउँछ । हामीलाई तिम्रो दाहिने कि देवे्र पाखुरा काटौ वा तिमीलाई अफिस वरिपरि नै कारवाही गरौ कि अदालतमा, बाटोमा मार्ने भन भनी फोनमा धम्की दिन्छन् । बजिरसिंहविरुद्ध केस हामीले नै गरेका हौं । बजिरसिंहको अदालती प्रक्रियाका क्रममा अदालतको परिसरमा हामीलाई अरु दलालले हिर्काउन आएका थिए । बजिरसिंह आफैले पनि अदालत परिसरभित्रै आक्रमण गरेको थियो । म आफै बकपत्रको लागि महिलालाई लिएर जाने गर्दथें । मलाई बेच्ने बजिर सिंह नभएर अरु नै थिए । ऊ अहिले जेलबाट निस्किसक्यो । पछिल्लो समयमा बजिरसिंहले जेलभित्र बसेर नै मविरुद्ध जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएर परिवारमा उल्टै पुलिसले केरकार गर्न आयो । कत्रो विडम्बना । घरमा धम्की आउँछ । दाजुभाइलाई कतिसम्म धम्की आयो भने मेरो दाईको छोरालाई गाह्रो भयो । हामी बस्ने ठाउँ भन्न मिल्दैन अहिले पनि । थाहा पाए उनीहरुले समस्यामा पार्छन् ।
बेचविखनविरुद्ध मुद्दा लड्न अरु जस्तो होइन । एकदमै चुनौतीपूर्ण काम हो । महिलालाई मुद्दा दिन हामीले दवाव दिन मिल्दैन । कसैले पनि दलालविरुद्ध जानु भनेको उहाँहरु बेचेर फर्केको हो भनेर टिका लगाएर फर्केको सरह हो । हाम्रो समाज त जो समस्यामा परेको छ उसलाई सहयोग गर्नुभन्दा अपराधीलाई स्यावासी दिन्छ । समस्यामा परेका व्यक्तिलाई छिःछिः दुरदुर गर्छ । हामी दिदीबहिनीले न्याय पाऊन् भनी चाहन्छौ । तर त्यसको विपरित भएपछि दबाब दिन सक्दैनौ । धेरै महिला सानो उमेरमा बेचविखनमा परेको हुन्छ । धेरैको केसमा दलाल चिनेता पनि स्थानीय स्तरको दलाललाई बाटो बनाइदिने मात्र हुन्छ । मेन दलालको नामथर, ठेगाना, पनि थाहा हँुदैन । कसैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन खोजे त्यहाँको स्थानीय, नातेदार पनि हुन सक्छ । परिवारको दवावले पनि महिलाले मुद्दा हाल्न सक्दैन, सानो उमेरकाहरूबाट दलाल पहिचान हुँदैन । विना पहिचान मनोमानी रुपमा यो अपराधी जस्तो छ भन्न मिलेन ।
शक्ति समूहसँग शुरुका दिन
ग्रामिण महिलाको ६ महिने तालिममा सहभागी भएँ । त्यो तालिमको आधारमा महिला पुनस्र्थापना केन्द्रले १० दिनको आधारभूत स्वास्थ्य तालिम राख्यो । र त्यो तालिमको अन्तिम दिनमा शक्ति समूह गठन भयो । मैले शक्ति समुुह सुरु भएर मात्र होइन, सुरु नगर्दा नै यो यात्रा व्यक्तिगत हिसाबमा पनि सुरु गर्दै थिएँ । पछि संस्था गठन भएपछि तुरुन्तै काम सुरु ग¥यो । अनौपचारिक रुपमा काम गर्दा पूजा मिजार, अरुणा भन्ने रत्न माया तामाङ, अनु भन्ने म थियौं । नेदरल्याण्डको मामाकास भन्ने संस्थामा काम गर्ने लिन्च्युसँग हाम्रो भेटले हामीलाई अगाडि बढ्न आर्थिक सहयोग दिनुभयो, ५ लाख रुपैयाँ । अनौपचारिक रुपमा काम गर्न, पैसा ओरेकको रहोबरमा रहेर त्यो काम सुरु ग¥यौ । २०५४ सालमा संस्थाको रुप नलिँदादेखि नै हामीले काम शुरु ग¥यौं । ब्रोसर तयार गर्ने, आवश्यक नीतिनियम, विधान, नियमावली सबै बनाउने काम ग¥यौ । हामी समुहको रुपले मात्र काम गरेर हाम्रो स्थायीत्व हुँदैन, पहिचान बन्दैन । त्यसले गर्दा संस्थागत रुपमा संस्था दर्ता गर्नुपर्छै भनी डा. मीना पौडेल लगायत सेभ द चिल्डे«नका सीता घिमिरे, सिविनका गौरी मल्ल, सन्ध्या श्रेष्ठ, सिन्धुपाल्चोक, महिला निर्भरता केन्द्रकी भगवती नेपालले धेरै सहयोग गरे । डा. रेणु राजभण्डारीको सहयोगमा शक्ति समुह गठन भएको हो । ओरेकको अफिसभित्रको एउटा सानो कोठामा शक्ति समूह बसेको थियो । ०५६।५७ मा शक्ति समुह दर्ता भयो । त्यो समयमा म गाउँमा थिएँ । कार्यसमितिको साधारण सदस्यमा थिएँ । नागरिकता भएकाहरु कार्यसमितिको मुख्य पदमा बसे ।
प्रस्तुतिः अमिका राजथला
बालिका विवाहविरुद्ध रणनीतिक योजना
सपना बुन्दै मुक्त कमलरी किशोरीहरु
महिला मुक्ति आन्दोलनको मार्ग
बलात्कार बलात्कार हो, भारतमा होस् वा नेपालमा
अझै हुन्छन् बालविवाह
महिलालाई नागरिक नठान्ने नेपाली कानून